Kooxda Real Madrid oo iska fasaxeysa SHAN xiddig suuqa xagaaga ee soo socda – Gool FM
Kooxda Real Madrid oo iska fasaxeysa SHAN xiddig suuqa xagaaga ee soo socda
(Madrid) 19 Mar 2020. Waxay u muuqataa in Real Madrid ay qarka u saaran tahay in suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda ay gali doonto xaalad jahwareer ah, inkastoo lala xiriirinayo inay la soo saxiixan doonto ciyaartoy badan, laga yaabee in kuwa ugu cad cad ee imaan kara garoonka Santiago Bernabéu ay yihiin xiddigaha Kylian Mbappé iyo Erling Håland.
Laakiin ka hor inta aysan Real Madrid ku fikirin inay sameyso heshiisyo cusub si ay ugu xoojisato safka kooxdeeda, Los Blancos waxay u baahan tahay inay iska fasaxdo qaar ka mid ah ciyaartoy aan loo baahnayn, waxaana jira magacyada 5 ciyaartoy oo bixi doona xagaaga soo aadan.
Muhiimada ugu weyn ee kooxda Real Madrid ayaa ah inay iska fasaxdo laacibka reer Weles ee Gareth Bale, kaasoo aan wax bandhig ee fiican ka sameynin Los Blancos mudada labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay, waxaana jira sababo badan oo arintan ka dambeeya, oo ay ugu muhiimsan yihiin mushaarkiisa oo ah mid aad u sarreeya, dhaawacyo badan iyo qaab ciyaareedkiisa oo hoos u dhac weyn ku yimid.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay inay jiraan magacyada ciyaartooy kale ee u sharaxan inay ka tagaan Real Madrid waxaana ka mid ah xiddigaha James Rodriguez iyo Mariano Díaz, Los Blancos waxay isku dayi doontaa inay dhaqaale ahaan uga faa’iideysato bixitaankooda si ay u maalgeliyaan heshiisyo kale ee cusub.
Xiddigaha kale ee la filayo inay ka dhaqaaqaan garoonka Santiago Bernabéu ayaa waxaa ka mid ah Luka Modric iyo Marcelo, maadaama labadan xiddig ay sii weynaanayaan isla markaana uu qaab ciyaareedkoodu uu hoos u dhacayo.
Koox weyn ee ka ciyaarta horyaalka Talyaaniga oo ku fikireysa Philippe Coutinho